FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHI-CHI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chi-Chi
Alika miteraka fifangaroana Chihuahua / Sinoa voaendy
Flash Gordon ilay Chihuahua voahosotra sinoa afangaro amin'ny alika kely mandritra ny 3 volana— 'Flash dia vokatry ny vovo-dronono voahosotra Sinoa Voahangy sy Chihuahua. Izy no alika kely mahafatifaty indrindra hatramin'izay. Ary koa, ny fifangaroan'ny karazany dia niteraka toetra mahafinaritra tokoa. Miaritra ny ahy izy natiora toetra ary ny hafanam-po adala an'ny zanako vavy 10 taona, na dia mbola mitazona toe-tsaina tia sy milalao aza izy. Tiany ny fijerin'ny olona ary alika hafa . izy poti voaofana mora ary efa mianatra baiko fototra tsy misy fiofanana. Feno herin-tsaina dia vonona handeha foana izy, fa milamina kosa amin'ny alina. Handry amin'ny tongotro eo ambonin'ny fandriako amin'ny alina Izy. Tena fifaliana tokoa izy hatrizay ary manantena fiarahana am-pitiavana an-taonany maro izahay. '
Ny alika Chi-Chi dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny Sinoa voadona . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Flash Gordon ilay Sinoa Crested Chihuahua dia afangaro amin'ny alika kely mandritra ny 3 volana
'Ity no Quinn, zanak'alika sinoa Crested x Chihuahua mix. Ny reniny dia ilay Sinoa Crested ary ny rainy dia ny Chihuahua. Samy nilanja 8 lbs ny ray aman-dreniny. ary mipetraka eo amin'ny 1,6 lbs fotsiny izy. amin'ity sary ity. Teraka tamin'ny taona a fako misy 7 , ny sasany toa Chihuahuas feno, ny sasany toa an'i Quinn ary ny roa sola! Sahala amin'ny a izy ireo Volo Meksikana , raha tsy hoe mavokely izy ireo! Quinn dia 7 herinandro amin'ity sary ity ary izy dia efa Feisty BE ! Milalao tsara amin'ny alika keliko iray hafa izy saingy matahotra ny haben'ny alika lehibe eto aminay, fa efa zatra azy. Matetika izy dia milalao kilalao bitika kely toy ny totozy tototry ny baolina sy baolina feno lakolosy satria mitovy habe aminy ireo. Mbola matory be foana izy, mazava ho azy, fa miha mavitrika isan'andro. Malemy be ny hodiny ary marefo be ny volony. TIA ny ankizy ary tiany fotsiny ny zanako vavy 2 taona. '
Quinn ilay zanak'alika Chi-Chi amin'ny 7 herinandro
Spike the Chi-Chi (sinoa Crested / Chihuahua mix) amin'ny 8 volana, milanja 5,5 lbs— 'Tsy tokony hitombo be izy, raha misy izany. Alika mahafinaritra izy, be fiaraha-monina ary matanjaka. '
'Sarin'ny zanak'alika sy rahavavy Chi-Chi (Chihuahua / sinoa Crested mix) amin'ny 6 herinandro. Teo i dadany nisy puff puff Chinese Sinoa nianjera ary tao i Chihuahua. Hatreto dia tian'izy ireo ny manaraka anay eran'ny trano ary milalao be. Samy tian'izy ireo ny nitazona azy ireo ary nahafinaritra azy ireo ny nifandray tsara. '
Anadahy sy rahavavy Chi-Chi (Chihuahua / sinoa Crested mix) alika amin'ny 6 herinandro
inona ny alika manana lela volomparasy
Lisitry ny alika mpiompy sinoa mifangaro
Lisitry ny alika mitambatra Chihuahua mifangaro
Malagasy bulldog pitbull afangaro mahatratra
spaniel akoho mifangaro retriever volamena
zanak'alika amerikana bulldog sy pitbull
glider glider? trackid = sp-006
sary alika alika shepard
dachshund sy italianina greyhound Mix
voalavo terrier lava volo chihuahua mifangaro